म जस्ती राम्री र कुमारी केटीलाई लाइन नदिने केटालाई दाजुभाइ बनाउन चाहन्छुः ज्योती मगर - Nepal Insider
Home/मनोरंजन/म जस्ती राम्री र कुमारी केटीलाई लाइन नदिने केटालाई दाजुभाइ बनाउन चाहन्छुः ज्योती मगर
म जस्ती राम्री र कुमारी केटीलाई लाइन नदिने केटालाई दाजुभाइ बनाउन चाहन्छुः ज्योती मगर
गसिपः ज्योति मगर निरन्तर चर्चामा अाइरहन्छिन्, उनि आफूलाई लाइन नमार्ने सबै केटालाई राखी बाँध्न चाहन्छिन् । हालै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिन् ‘यति राम्री र कुमारी केटीलाई पनि लाइन नदिने केटालाई आज म राखी बाँध्न चाहन्छु, कोही छ ?
अहिलेसम्म अविवाहिता छिन् ज्योति । अब परिवारले पनि बिहेका लागि कर गर्दा हुन् । तर, उनको बिहे जुरेको छैन । अन्य कलाकार जस्तो अफेयर्सको हल्ला पनि चल्दैन उनको । सायद केटाहरुले नै वास्तै गरेनन् कि क्या हो ?
अब भए भरका केटालाई राखी बाँधेर दाजुभाइ बनाउने भएपछि उनको बिहे नहुने सम्भावना बढ्यो । भनेपछि संन्यासी नै बन्ने हुन् त ज्योति ?
त्यसैको आक्रोश त होला रक्षा बन्धनको अवसरमा आफ्नो सुन्दरतालाई नजरअन्दाज गर्ने केटाहरुलाई राखी नै बाँध्ने घोषणा । अब अहिलेसम्म ज्योतिले कतिलाई राखी बाँधिदिइ होलिन् त्यो उनैलाई थाहा होला । अब भए भरका केटालाई राखी बाँधेर दाजुभाइ बनाउने भएपछि उनको बिहे नहुने सम्भावना बढ्यो । भनेपछि संन्यासी नै बन्ने हुन् त ज्योति ? यो कुरा उनैलाइ थाहा होला ।
नेपालीले पकाएको खानाका सौखिन अम्बानी, सबै कुक नेपालीहरु नै !
अनमोलको ‘एन्टी हिरोमा’ जसिता हिरोईन
छोरी सुहानालाई लिएर ‘ए मेरो हजुर ४’ बनाउदै झरना थापा
अभिनयका साथसाथ रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा समेत सक्रिय यी अभिनेत्री, फिल्मबाट भन्दा धेरै रेष्टुरेन्टबाट कमाउँछन्